Owayesakuba nguMsebenzi we-Federal uyamangala, etyhola i-Anti-Gay Bias kwi-Aviation Agency - Ezopolitiko
Owayesakuba nguMsebenzi we-Federal uyamangala, etyhola i-Anti-Gay Bias kwi-Aviation Agency
UAndrew Harnik / AP
UMlawuli we-FAA uMichael Huerta, ekhohlo, kunye noNobhala wezoThutho u-Anthony Foxx
E-WASHINGTON - UDavid Baldwin ucela inkundla ye-federal ukuba iyalele ulawulo luka-Obama ukuba ahlawule ngenxa yocalucalulo oluchasene ne-gay athi wayejongene nayo ngelixa esebenza kwi-Federal Aviation Administration eMiami.
Igqwetha lika-Baldwin lixelele i-MC chatel ukuba injongo yesimangalo inkulu kakhulu, nangona kunjalo, ejolise ekwandiseni umda we-arhente yamva nje efumene ucalucalulo oluchasene ne-gay luthintelwe yimithetho ekhoyo yamalungelo oluntu.
'Mr. Ityala likaBaldwin linamandla okuchaphazela abantu abaninzi kuneNkundla [ePhakamileyo] Obergefell [Umtshato] ityala kuba kukho amadoda nabafazi abathandanayo abanemisebenzi kunabo bathandana besini esinye abafuna ukutshata,' igqwetha likaBaldwin, uLowell Kuvin, uxelele iMC chatel ngoMvulo ngokuhlwa.
U-Baldwin - otyhola ukuba udluliselwe ukunyuswa kwi-FAA ye-FAA's Miami Tower Terminal Radar Approach Control station ngenxa yokuba u-gay - wathatha ityala lakhe kwinkundla ye-federal kule veki iphelileyo, elandela isigwebo esimxhasayo kweli hlotyeni kwi-Equal Employment. IKhomishini yamathuba evumele ukuba ityala lakhe liqhubele phambili.
ukuhambisa umbulelo wombulelo wemacy
U-Baldwin waxoxa - kwaye i-EEOC yavuma - ukuba ukuvinjelwa kocalucalulo ngokwesondo kwiSihloko VII soMthetho wamaLungelo oLuntu we-1964 kubandakanya ukuvinjelwa kocalucalulo olusekelwe kwisini somntu.
'[A]izityholo zocalucalulo olusekelwe kwisini ngokuyimfuneko zichaza ibango localucalulo ngokwesini,' iEEOC yalawula ngoJulayi kumngeni kaBaldwin. U-Baldwin emva koko wayeneentsuku ezingama-90 zokuthatha isigqibo sokuba athathe eli tyala kwinkundla yamatyala.
Kwisikhalazo, esifakwe kwinkundla yomanyano eMiami ngo-Oktobha 13, uBaldwin wamangalela iTransportation Sec. Anthony Foxx kunye nomlawuli we-FAA uMichael Huerta kwizikhundla zabo ezisemthethweni. U-Baldwin ubanga ukuba 'akazange akhethelwe isikhundla esisisigxina njenge [uMphathi weCandelo eliPhambili] kwiziko leMiami Tower' kwaye eso sini-ngokukodwa, inyani yokuba uli-gay-yayiyi 'nto ekhuthazayo' kwinto yokuba ayinyuswanga.
U-Baldwin utyhola ukuba 'wakhethwa ngenxa yokuqhelana nesondo kwaye waphathwa ngendlela eyahlukileyo kunabasebenzi asebenza nabo abanesini esingafaniyo ngabaphathi bakhe ngenxa yengcinga engafanelekanga yesini,' ngokutsho kwesikhalazo.
Njengoko iinzame zomthetho zokudlulisa ukhuseleko olucacileyo lwe-LGBT ziye zamisa kwiNkomfa, ingxabano yokuba ucalucalulo lokuziphatha ngokwesondo lufanele lube okanye lugutyungelwe phantsi kwemithetho ekhoyo yamalungelo oluntu iye yaphuhliswa kwiminyaka yakutshanje ngabanye abameli kwaye, ngeli hlobo, yi-EEOC.
Ngelixa kuphela iNkundla ePhakamileyo inokukhupha isigwebo esiqinisekileyo malunga nokutolika, izigqibo zeEEOC zinikwa isidima esibalulekileyo ziinkundla zomdibaniso. Okwangoku, nangona kunjalo, isigqibo se-EEOC sibophelela kuphela kwii-arhente zomdibaniso.
isitulo esijikelezayo seqanda esine-stand
'Ngelixa isigqibo se-EEOC kwi Baldwin v. Foxx Yayilinyathelo elikhulu eliya phambili lokuphelisa ucalucalulo lokuziqhelanisa nesondo ngokuvumela abasebenzi bomanyano ukuba balandele ibango lokuziqhelanisa ngokwesondo phantsi koMthetho wamaLungelo oLuntu ka-1964 kunye neSihlokwana VII, yayilinyathelo nje elincinci ukuya phambili kubasebenzi abangengabo urhulumente, 'uKuvin, igqwetha likaBaldwin, latsho. Iindaba zeBuzzFeed ngoMvulo ngokuhlwa. 'Isinyathelo esilandelayo esinengqiqo kuMnu. Baldwin, ongathanda ukubona ukukhuselwa kweSiqendu VII kwandiswe kubasebenzi abangekho phantsi kukarhulumente abatyhola ucalucalulo lokuziphatha ngokwesondo, yayikukuzisa umcimbi kwiinkundla zamatyala.'
UKuvin wongeze ukuba uBaldwin uthathe isigqibo sokusa lo mbandela kwinkundla yomdibaniso 'emva kokuba kubonakala ukuba imiba ayizusonjululwa' ngoxolelwaniso ne-FAA, athe uKuvin 'akazange aphendule' kwiinzame zikaBaldwin zokusombulula lo mbandela ngaphandle kokumangalelana. .
Intshukumo kwi-sexual orientation coverage yi-EEOC ayimangalisi. Kwi-2012, i-EEOC yathatha inyathelo elifanayo malunga nokuvezwa kocalucalulo oluchasene nobulili, ukufumanisa kwimeko eyaziswa nguMia Macy ukuba ucalucalulo olusekelwe kwisini lugutyungelwe phantsi kwebar yokucalucalulwa ngokwesini kwiSihloko VII. Ulawulo luka-Obama luye lwavumelana naloo ngcaciso, kodwa aluzange lubhengeze isivumelwano esinjalo kunye nokutolika kwe-EEOC malunga nocalucalulo oluchasayo.
Izityalo zegadi zangaphakathi
Ityala likaBaldwin linikezelwe kwiJaji yeNkundla yeSithili yaseMelika uKathleen Williams, oqeshwe kwibhentshi ngo-2011 nguMongameli Obama.
Omnye ummeli ophambili wamatyala eEEOC wakhuthaza abanye ukuba bavule amatyala afanayo.
'I-EEOC iqiqe ngamandla Baldwin Isigwebo sifanele ukuthotyelwa kwiinkundla zomdibaniso kwilizwe liphela, kwaye sinethemba lokuba inkundla yesithili yomanyano eFlorida iya kujoyina iinkundla zomdibaniso kwiphondo laseWashington naseWashington, D.C. ekugwebeni ukuba abamangali abangamafanasini banokuzisa amabango eSihlokwana VII, 'Inkululeko yokuSebenza uTico Almeida uxelele I-MC chatel. . 'Abaninzi be-LGBT baseMelika kufuneka balandele ukukhokela kwabantu abanesibindi njengoDavid Baldwin kunye noMia Macy ngokufaka amabango phantsi kocalucalulo localucalulo ngokwesondo kuMthetho wamaLungelo oLuntu, i-Fair Housing Act, kunye neminye imimiselo ekhoyo ye-federal.'
Imiyalezo ishiywe kunye neSebe lezoThutho kunye neeofisi zeendaba ze-FAA zifuna ukuphawula ngesi simangalo.
Isikhalazo sikaBaldwin (PDF)
Isikhalazo sikaBaldwin (Umbhalo) Khuphela iPDF
Igumbi leendwendwe imibono yokuhombisa
Ngaba abantakwabo scott bayisitabane
umntwana ipeyinti ekhuselekileyo kwindawo yokugcina izinto ekhaya
uyisusa njani iphepha lodonga
imibono emikhulu yobugcisa eludongeni